IELTS Task I Writing ကို အမှတ်ကောင်းကောင်းရချင်ရင် လိုက်သင့်သော အချက်များ – SLD EDUCATION
နိုဝင်ဘာ 25, 2021 နိုဝင်ဘာ 28, 2021 francisling
IELTS Writing Task 1 ကောင်းကောင်းရေးနိုင်ဖို့…..
Task 1 ကို အချိန်မှီအောင် ဘယ်လိုရေးမလဲ?
မိနစ် ၂၀ နဲ့ အပြီးရေးနိုင်ဖို့ …
1. Introduction ကို မြန်မြန်လေး pharaphrase လုပ်နိုင်အောင် ကျင့်ပါ။ (စာကြောင်း အရှည်တစ်ကြောင်းရေးနိုင်ရင် ရပြီ။)
2. Overview ကို main trends (no details) ပဲရေးကျင့်ပါ။ ပထမပိုင်းတော့ Main trends တွေကိုမြန်မြန်တွေ့နိုင်အောင် ကျင့်ရပါမယ်။ ပြီးတော့ ပါးစပ်နဲ့ပဲ စာကျောင်း ၂-၃ ကျောင်းလောက်စီကို စီဖွဲ့ရွက်ပြောပါ။ (Introductionက အရမ်းတိုရင် ပူးရေးပါ (သို့) ဒုတိယအပိုဒ်မှာ ရေးပါ။ နောက်ဆုံးစာပိုဒ်မှာလည်း conclusion ပုံစံနဲ့ ရေးရင်လည်းရတော့ရပါတယ်)
3. Body paragraphs တွေမှာလည်း အရေးအကြီးဆုံး အချက်တွေကိုပဲ ရွေးရေးပါ။ (ရွေးတတ်အောင်လည်း ကျင့်ပေးပါ။ essay planningလုပ်တဲ့အချိန်မှာ တပါတည်း ရွေးနှုတ်မှတ်ထားပါ။)
4. Conclusion: ဒီအပိုင်းကိုတော့ မရေးရင်လည်းရတယ်။ ရေးမယ်ဆိုရင် overviewမှာရေးထားတဲ့ အရာနဲ့ လုံးဝမတူအောင်ရေးပါ။ ရေးဖို့အချိန်မရှိရင်လည်း ထားခဲ့ပါ။
5. မိနစ် ၂၀ နဲ့ ပြီးအောင်ရေးကျင့်ပါ။ အချိန်မလောက်ရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ အသေးစိတ်တွေကို ရေးနေလို့လား၊ ရေးပြီးသား အချက်တွေပဲ ပြန်ရေးနေလို့လားဆိုတဲ့ reasons ပဲရှိပါတယ်။
Don’ts (မလုပ်သင့်သော အရာများ)
1. Task 1 ကို personal way နဲ့ လုံးဝမရေးပါနဲ့။ (ဥပမာ- I can observe that…., from my observation, I estimate that….ဆိုပြီးမစသင့်ပါဘူး။)
2. Avoid repeating words and ideas: သုံးပြီးသား verbs, adjectives, adverbs တွေကို ပြန်မသုံးပါနဲ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် သုံးပြီးသာ sentence styleကိုတောင် ပြန်မသုံးပါနဲ့။ နောက်ပြီး မြန်မာကျောင်းသား၊သူတွေ အများအားဖြစ် အမှားလုပ်မိတဲ့ အပိုင်းက ပြောပြီးသား ideaတွေကို ပြန်ပြန်ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးပါ။ ဒါကဘာကြောင့်ဒီလို့ လုပ်ကြလဲဆိုတာ နားလည်ရခက်ပါတယ်။ သူတို့ ရေးတဲ့ အချက်က အရမ်းကောင်းလို့ ဖတ်တဲ့ ဆရာ/မကို အမှတ်တွေ အများကြီး ပေးစေချင်လို့လား (သို့) idea အသစ်ကို စဉ်းစားလို့မရလို့ ထပ်ထပ်ပြောတာလား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ တစ်ခု အမြဲတမ်းမှတ်ထားသင့်တဲ့ အရာကဘာလဲ ဆိုတော့… ကိုယ်ရေးတဲ့ essay ကို ဘွဲ့တွေအများကြီးရထားတဲ့၊ စာသင်သက်တန်း အများကြီးရှိထားတဲ့၊ စာရေးတဲ့ အပိုင်းမှာ အများကြီး ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေ ဖတ်တယ်ဆိုတာ သတိရပြီး ကိုယ်ပြောချင်တာ တစ်ခေါက်ပြောရင် သူတို့ချက်ချင်း ရလိုက်တယ် ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့…
3. Planning မလုပ်ဘဲ မရေးပါနဲ့။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖြစ်စေ planning လုပ်တတ်အောင်လုပ်ပါ။ စာကြောင်းတွေ အပြည့် ရေးပြီး planning လုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်တွေ ကုန်သွားနိုင်တယ်။ Mindmap/ Fishbones/Bullet points စသည့် ကိုယ်အားသာတဲ့ နည်း တွေသုံးပြီးတော့ planning လုပ်ကြည့်ပါ၊ ပြောကြည့်ပါ၊ ပြီးတော့ရေးကြည့်ပါ။ စာမေးပွဲမှာ ၃-၄ မိနစ်နဲ့ ပြီးနိုင်အောင် ကြိုတင်လေ့လာထားပါ…
4. Revision မလုပ်ပဲ မထားပါနဲ့။ စာမေးပွဲထဲမှာ Planning က 3-4မိနစ်ဆိုရင်၊ revision ကလည်း 3မိနစ်တော့ ထားသင့်တယ်။ တကယ်ရေးချိန်ကို 12မိနစ်လောက်နဲ့ ပြီးနိုင်အောင် ပြင်ထားရမယ်။ revision လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ spelling, grammar ကိုcheckလို့ ရသလို၊ သုံးပြီးသား စာလုံးတွေ၊ ပြောပြီးသား ideaတွေ ထပ်နေလားဆိုတာ တွေရမည်။
1. Grammatical Range and Accuracy_
a. Tenses: အချက်အလက် (data)တွေ၊ နံပါတ် (numbers)တွေအပြင်၊ ပထဝီအနေအထား၊ အဆောက်အဦး၊ ကွင်းပြင်စသည့်အချက်တွေကို အချိန်အပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်ပြီး tensesတွေကိုပြောင်းပြီးရေးနည်းတွေကို သိရပါမည်။
b. Sentence Variation: simple, compound, compound complex sentences တွေကို သိသင့်ပါတယ်။
2. Lexical Resources အတွက် –
a. Percentage, proportion, fraction စသည့်ဂဏန်းတွေကိုဖေါ်ပြတဲ့ စာလုံးတွေ၊
b. adverbs တွေ၊
c. adjectives တွေ
d. collocation words (ပညာရေးအကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင် ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာလုံးတွေ၊ ecology အကြောင်းဆိုရင် ထိုနည်းတူစလုံးတွေ) ကို လေ့လာရမည်။
3. Main trend ကိုဖော်ပြောနိုင်ဖို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေမပါဘဲ ပြောကြည့်ရေးကြည့်လုပ်ရမည်။ သုံးသင့်တဲ့ Phrase တွေ, coherent devices တွေကို မရိုးမထပ်အောင် သုံးနိုင်ဖို့ စုထားပါ။
4. ကျင့်တဲ့အချိန် အချိန်ကို ၂မျိုးခွဲပြီးကျင့်ပါ။ free practice-အချိန်ကို skills develop လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ကြိုက်သလောက်ယူပြီး essay တစ်ပုဒ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျင့်ရမည်။ timed practice–အချိန်သတ်မှတ်ပြီး အပြီးရေးရမည်။
5. ရေးပြီးရင်လည်း Revision လုပ်ပါ။ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး စာရေးဆရာတွေတောင် ရိုးရိုးစာတစ်ဆောင်ကို ၂ ခေါက်အနည်းဆုံးရေးတယ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက်ဆိုရင် အကြိမ်ပေါင်း များစွာ reviewလုပ်ပြီး၊ ပြန်ရေး (revise) တယ်။ အစပိုင်းတော့ ထပ်ခေါက်ထပ်ခေါက်ပြန်ရေးရမယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာ/မကိုလည်း ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဖတ်ခိုင်းပြီး feedback တွေကို ယူပါ။ ပထမတစ်ခေါက်ပဲရေးထားတဲ့ အကြမ်း (draft) နီးပါးပဲ ရှိတဲ့ essayကိုပဲ ဆရာ/မကို check ခိုင်းမယ်ဆိုရင် ထိရောက်မှုမရှိတော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့3မှတ်တန် essay ကို ၉မှတ်တန်ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်ဆရာ/မမှ feedback မပေးနိုင်ဘူး (မပေးချင်ဘူး)။ ကိုယ်တိုင် review လုပ်တဲ့ အကျင့်ရှိရင် စာမေးပွဲထဲ ကိုယ်ရေးထားတာ ပြန်စစ်ချိန် ဘယ်နေရာ အားနည်းတယ်ဆိုတာလည်း ချက်ချင်းသိမယ်။ review နှင့် revise လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးတွေရှိရင် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ရဲ့ အရေးအသားတွေလည်း လက်သန်ပြောင်လာမယ်။
6. အိမ်မှာ Revision လုပ်တဲ့အချိန် ကျယ်ကျယ်ဖတ်ပေးပါ။ သုံးပြီးသား စာလုံးထပ်နေတာတို့၊ ပြောပြီးသား idea ပြန်ပြောနေတာတို့ကို ချက်ချင်းကြားရပါမည်။
7. Planning လုပ်ပြီး မရေးခင်မှာ အတော်ဆုံး ဆရာ/မ တစ်ယောက်ကို မြင်ယောင်ပြီး အကောင်းဆုံး ရှင်းပြကြည့်ပါ။ သူတို့ ဘာမေးခွန်းတွေ မေးလဲဆိုတာလဲ မြင်ယောင်ကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေပေးပါ။ ပြီးတော့ planningကို ပိုကောင်းအောင် revise လုပ်ပါ။
8. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း ကျင့်ပါ။ အတူ planning လုပ်ကြည့်ပါ။ ရှိတဲ့ ideas တွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရှင်းပြကြည့်ကြပါ။ ငြင်းစရာရှိရင်လည်း ငြင်းကြပါ။ feedback တွေလည်းပေးကြပါ။